Unokundinceda ndifumane i-SEO inzuzo ye-backlinks ichaziwe?
Ngaphambi kokuba nantoni na enye, makhe sijonge kwi-glossary enkulu malunga ne-backlink kwi-SEO. Kufuneka uqonde le migaqo eqhelekileyo malunga ne-intanethi edibeneyo kunye nenkqubo yokwakha ikhonkco kwinqanaba. Makhe sijonge ngezona zinto ezisisiseko malunga ne-backlinks ezichazwe ngcaciso engundoqo.
I-Basics nge-Backlinks ichazwe
Qhasela iJaji - ibonisa ukuqikelelwa ngokubanzi, kunokuba imilinganiselo ecacileyo. I-juice yesikhonkco yinto yokuba "amandla," "xabiso," kunye "negunya" lekhonkco elidlulileyo ukusuka kwelinye ikhasi lewebhu ukuya kwelinye. Eli gama lisetyenziselwa ukunika ingqalelo kwi-backlinks esemgangathweni kunye ne-DoF elandelayo efakwe kwidilesi ye-HTML. Ezi zikhokelo ezinjalo zivame ukuba zigqitywe okanye ziphinde ziphindwe kwakhona enye yezona methrikhi ezinxibelelwano ezibalulekileyo zewebhu ezibizwa ngokuba yiP PageRank.
I-Backlink nge DoF elandelayo
DoF izixhumanisi - luhlobo olulodwa lwee-backlink ezisetyenziselwa injongo ye-SEO. Ngokucacileyo, amandla anamandla ase-backlinks neDoF elandela ngokubanzi malunga nokukwazi kwabo ukudlula iJoice Link. Ezi zixhumanisi zisebenza ngeenjongo zokukhomba - ndiyathetha ukuba zibanceda ukukhangela i-bots ukuhamba ngeendlela ezihlukeneyo kunye namaphepha ewebhusayithi yakho okanye iblogi. Ngexesha elifanayo, i-backlink ne DoF elandelayo yenza umzila wangaphandle okhomba kwindawo yokuya kwenye indawo ngaphandle kwiWebhu. Kuthetha ukuba wonke umsebenzisi ophilayo uyavunyelwa ukuba "alandele" indlela yoxhumo oluxhunyiwe.
HayiLandela i-backlink ingachaza olunye uhlobo lwezalathisi, nangona kunjalo, nokuba nobunzima obunzima kunye nefuthe kwi-SEO. Ikhutshwe ngeTayiti engezantsi, ezi ziqhagamshelo azikwazi ukudlula iJuni yesiHlomelo. Ngenxa yoko, abanalo impembelelo ngqo kwiindawo zokubeka indawo. Umzekelo, Akukho zikhonkwane ezilandelayo zingasetyenziswa xa ufuna ukusetha uxhumano lwangaphandle ngaphandle kwewebhusayithi ethembekileyo okanye iblogi. Nangona kunjalo, basenokuba luncedo ngokubhekiselele kwi-indexing kwaye bangakunceda ukwakha iipotifoliyo ezahlukeneyo zamanqaku ahlukeneyo kunye namandla angalingani kunye nenjongo. Yaye ngokukodwa ulwahlulo luyipropati ezuzisa kakhulu yeprofayili yakho. Ndiyathetha ukuba lo mqondiso ubaluleke ngokwaneleyo ukuba i-Google ithathelwe ingqalelo xa kuziwa ekunikezeni izikhundla zendawo yokukhangela.
I-backlink (Quality) ye-Backlink
Olu hlobo lwama-backlink lungachazwa nje ngokuba unxibelelwano oluphantsi kwexabiso ludalwa ngokuzama ukuphakamisa izikhundla ezikhoyo zokusesha kwizinto ezikhoyo. Ndiyathetha ukuba ukubheja kwi-spammy, ukungabalulekanga okanye okungekho mthethweni, ezi ngqamaniso ziyakwazi ukulimaza yonke i-effort yakho ye-SEO, kunokuba unike naluphi uphuculo lokwenene. Yingakho kufuneka uqwalaselwe kwaye uhambe ukusuka kwiikhonkco ezinobulunga obuqhelekileyo ezifakwe kwiimali ezinkulu ezivela kwiivili ezinxibelelwano (i-link links), i-PBNs.
Olu hlobo lwesakhiwo sekhonkco sisetyenziselwa ukunika isiseko esiqinileyo kwisakhiwo sewebsite, senza ukuba kube lula ukufumana uphephelo. Izixhumanisi zangaphakathi zinika isahlulo kwidilesi enye - yenza kube lula ukuhamba kwiindawo ezahlukeneyo kunye namaphepha anxulumene newebhusayithi okanye iblogi. Kodwa ke, phawula ukuba isakhiwo esilungileyo sisisigxina esilinganiselweyo, esinokufaka isandla kwisithuba esiphakamileyo sokwenza uphando ngexesha elide, ngokukodwa ngokungathanga ngqo Source .